सहमतिको यौनसम्बन्धमा उमेर हद बढ्यो, ‘कान्छी’ ल्याएमा बिहे बदर ! (हेर्नुहोस पुरा समाचार ):: Sanchar Garage
सहमतिको यौनसम्बन्धमा उमेर हद बढ्यो, ‘कान्छी’ ल्याएमा बिहे बदर ! (हेर्नुहोस पुरा समाचार )
२५ साउन, काठमाडौं । जंगबहादुर र महेन्द्र राजाका पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा व्यापक हेरफेर भएको छ । अब भदौ १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ ‘मुलुकी संहिता’ अनुसार नेपाली समाजको नियमन हुन थाल्नेछ ।